Buy Eye Massager (15,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
ဖုန်းကြည့်များလို.၊ ကွန်ပျူတာ ကြည့်များလို.များ မျက်ရိုးတွေ ကိုက်နေပြီလား။
မျက်လုံး ညောင်းနေသူများအတွက် နှိပ်ပေးမယ့် Eye massager ကို Rocket တွင် အိမ်တိုင်ရာရောက် မှာနိုင်ပါပြီ။
Battery နှစ်လုံးနဲ. အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း – 15,000 (Delivery free in Yangon)
ဖုနျးကွညျ့မြားလို.၊ ကှနျပြူတာ ကွညျ့မြားလို.မြား မကျြရိုးတှေ ကိုကျနပွေီလား။
မကျြလုံး ညောငျးနသေူမြားအတှကျ နှိပျပေးမယျ့ Eye massager ကို Rocket တှငျ အိမျတိုငျရာရောကျ မှာနိုငျပါပွီ။
Battery နှဈလုံးနဲ. အသုံးပွုရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဈေးနှုနျး – 15,000 (Delivery free in Yangon)
အမည်: Eye Massager